bozyboleta - 11/06/2007 16:30
Misy tena anaovana fombafomba mitsy ny maty ka!
Raha ze efa hitako aloha de lanjalanjaina sady entina mandihy le razana avy eo entin'le fianakams manodidina in-7 an'le fasana.
Ny sasany moa hi-presenter-na ny zafiny na vinantony mbola tsy hitany t@ fahavelony hoe : I ann a!(le maty io), ty i ann sy ann sy ann. Ty farany ty angamba aloha tsy fomba fa fihetseham-pon'ireo fianakams fotsiny.
Ankoatra ny lafiny ara-pivavahana de ireo fomba sy fihetsika ireo koa no anisan'ny mahatonga ny kristiana sasany tsy manaiky ny famadihana fa tsy hoe mitsikera be fahatany akory.
Fa ny ahy de le antony hanaovana famadihana mitsy no mbola tsy azoko loatra e! Le manokatra fasana ho an'io manokana no tiako lazaina. Tsy maintsy atao ve?
T@ taona lasa de nisy gripa nahery be teto Mada t@ okt-nov iny. Ny antony araka ny nolazain'ny mpitsabo maro de noho ny famadihana satria ny vovoky ny maty de nanidina. Nisy tokoa gripa sy aretina hafa (oh gripa espaniola)izay nandripaka olona maro teto taloha be tany ka ireny mikroba ireny hono de tsy maty raha tsy an-jato taonany.
Io zao ho ahy de antony iray tsy tokony hanaovana azy raha ny lafiny maha-olona fotsiny no jerena.
pissoa - 11/06/2007 18:50
bozyboleta Na tiana na tsy tiana mantsy tsy maintsy misy fombafomba gasy atao rehefa mamadika na hoe manokatra fasana hanaovana famadihana, ohatra hoe mijery andro, miantso le razana mialoha ny amoahana azy ao am-pasana...Eny na dia somary misy fotoam-pivavahana kely aza eo alohan'io...
Efa nolazaiko tery ambony, tsisy an'zany na tiana na tsy tiana zany ! Manana ny safidiny izy amin'ny tiany atao ny tsirairay, ary eo no hisehoany ny tena mahaKristianina azy.
bozyboleta Fa maninona no hoe tsy maintsy anaovana fotoana manokana mitsy ny famohana fasana hanaovana famadihana, na mody lazaina hoe fanetsiketsehana na famonosan-damba ny razana?
Ka raha izay no tian'izy mianankavy, hodidinao amin'ny tiany hampiasana ny androny sy ny volany ve izy ? :-D:-D:-D
ary fa maninona koa moa no tsy maintsy atao amin'ilay tian'i bozyboleta ? :-D:-D:-D
Ny aretina dia vao maty ny olona iray dia efa tokony ho fantatra ny nahafaty azy, ary misy ny olona tsy azo alevina ao amin'ny fasany ary tsy azo kitihina intsony noho ny aretina. Misy manam-pahefana miandraikitra an'izany
xxx - 11/06/2007 22:32
Citation Afaka miaraka ve ny kristianisma sy ny famadihana na ny fomba nataon'ny razana taloha?
Diso fipetraka hatrany am-boalohany ny sujet, satria ampifanoherinao avy hatrany ny Famadihana sy ny maha-kristianina.
Tadidio fa tsy karazam-pivavahana ny famadihana fa fomban-drazana. Araka ny maha-fomban-drazana azy izay dia mety misy saritsarina sampy ao satria tsy mbola nahalala an'i Kristy ireo razantsika taloha. Na izany aza dia misy soatoavina maha-Malagasy ao. Ohatra : fanajana sy fankasitrahana ny soa vitan'ilay havana lasan-ko razana, fanamafisana ny fihavanana eo @ samy velona, taratry ny fitsanganan-ko velona koa hoy ny sasany fa tsy idirako loatra iny, sns.
Ka io dia mitovy @ fomba amam-panao rehetra, misy valeur tsara ao fa tsy feno.
Mazava be anefa ny tenin'i Kristy ao @ Soratra Masina :" tsy tonga handrava aho fa tonga hanatanteraka aza".
Tsy misy resaka Hoe : tonga hanafoana eto, fa tonga hanatanteraka. Noho izany, ny finoana kristianina tsy tokony hanafoana velively ny fomba amam-panaontsika olombelona fa kosa manadio sy manivana izay rehetra tsy lavorary ao. Ariana tanteraka izay tsy mifanaraka @ finoantsika, izay azo ovana moa dia hatsaraina rahateo.
Azo tanana tsara ny valeur rehetra ao fa ny fombafomba rehetra no mety hatsaraina na ovaina.
Farany, tadidio fa ny finoana kristianina tsy lalàna vaovao milatsaka avy any an-danitra fa kosa hazavana manilo ny fiainantsika.
marozevo - 11/06/2007 23:51
Knaugty moa no naoratra ity ?
Citation marozevo samihafa fijerintsika ra ny manatitra vonikazo sy ny mamadika no ampitovianao.
na ny vaza aza manatitra vonikazo de azo adika ko v io fa mitovy @ gasy manao famadihana ihany zany na de atao aza oe fanajana ny maty,inn no famaritanao ny famadihana ankoatry ny fanajana ny maty?
Aza manao resa-jaza moa eh... Ny tiana ho lazaina amin'izany anie dia hoe endrim-panajana e. Ny foto-kevitra no jereo, fa ny fisehony samihafa.
Izao koa : Asa na mba mahazo ny atao hoe inculturation ianareo manohitra ny famadihana ireo na tsia ? Rehefa tonga ny kristianisma, tsy midika fa natao "tabula rasa" ny fomba malagasy. Nolanjalanjaina ka izay tsara notazomina, ary izay mifanohitra amin'ny vaovao mahafaly navela.
Raha hiresaka (na hamorona) argument ianareo hilazana fa mifanohitra ireo, dia mba argument socio-culturel, na argument ethnologique sy ethique entina fa tsy argument mirefarefa amin'ny tany toy ireo.
andry44 - 12/06/2007 00:59
Raha miala kely @resaka finoana fa jerena ara-matérialy lay famadihana de zao ny fahitakoa azy:*
Isika malagasy de maro anaka;raha nisy mpivady tany aloha niteraka 8 oh,ireo zanany rehetra ireo de tsy ary hitovy ny fananany aty aoriana fa misy ny manana,misy ny atonony ary mety misy ny tsy manana.
Nefa refa hanao famadihana de zao ny zava-misy:atao ny devis de zaraina mitovy ny lany;iza no hanaiky handoha be eo??
Lay tsy manana voatery mamorona ny tsy misy fa tratry ny hoe"hariana ho tsy fianakm's tsony raha tsy mahavita adidy" de lasa mitrosa,mety @lay havany manana ihany izy no mitrosa.Ny mpmpitrosa tsy manomé raha tsy misy antoka de lay anjara lova kely no atao antoka.Ka raha tsy mahatafaverina de mihamahantra ihany!8-)
Mety hiady ny fiankam's @farany!
pissoa - 12/06/2007 01:33
Io soratrao io dia midika fotsiny hoe tsy ny famadihana no ratsy fa izy mianankavy no tsy mahay mifandamina sy mifampitsinjo :wink:
ikaretsaka - 12/06/2007 05:23
ooops voalazan'i pissoa ny saika holazaiko
niryna - 12/06/2007 07:20
Raha ny fantatro ara-tantara aloha de hoe taloha t@ mbola tsy niditra teto Madagasikara ny kristianisma de nanompo sampy ny malagasy, anisan'izany ny nivavahany sy nangatahany fitahiana t@ razana.
Izay koa no fahalalako azy,ny tena loza dia ahoana raha misy olona manasa?Andeha sa hijanona?sa manaja ilay olona nanasa ny tena?
Fa rehefa tonga kosa ny fivavahana kristiana dia niha-nazava t@ ireo izay nandray fa Kristy ihany no mpanalalana ary Izy irery ihany no mendrika hotompoina sy omena ny dera, laza, saotra, haja...
Satria moa ny kristiana tsy afaka manompo tompo roa ka noho izany tsy maintsy misafidy, na hanaraka an'i Tompo Jesoa tanteraka na tsia.
Izaho koa manaiky an'izany.Ny firenentsika anefa dia nino ny razana ka asa lahy izay hiafarany
Misy firenena tsy mandevina fa dorany ny razana dia tsy misy fonosina intsony izany,misy ilay lavenona avalana any anaty ranomasina.
bozyboleta - 12/06/2007 07:50
>>>pissoa ==> fanontaniana ny ahy hifanakalozan-kevitra fa tsy misy mitsy eo hoe manery ny olona @ ze tiako ka.
marozevo - 12/06/2007 10:15
Nitady aho hoe "aiza ary i pissoa no manampim-bava". Toa tsy misy an'izany fa milaza ny heviny koa izy.
Andry44 > Ny resaka materialy dia resaka hafa, io dia iombonako aminao koa : Mila fandinihina akaiky ny organisation'ny famadihana. Tsy adala akory ny mpianakavy fa hainy foana io, sady tsy tokony hidiran'ny hafa ny resa-pianakaviana manokana. Ny eto dia resaka fifandraisan'ny famadihana sy ny kristianisma.
bozyboleta - 12/06/2007 10:42
Ny andalana 2 voalohany nosoratako no ho an'i pissoa ry Marozevo fa ny ambiny ho an'ny rehetra a!
Ary alohaloha ary zao misy hoe "Aza mitsikera zavatra tsy hay", de le toy ireny no lazaiko hoe manampim-bava.
Tsy aleo ve ny olona mba samy haneho ny heviny fa izay no aleha eto?
Fanamarihana io ho an'ny dinika rehetra eto fa ialan-tsiny raha HS kely.
Atao anaty fononteny ihany reo nolazaiko reo fa tohizo @ zay ary ny dinika e! De :-*:-*:-* daholo.
Ny lohahevitra de hoe "Kristianisma sy ny famadihana!"
sonwin - 12/06/2007 11:06
Za aloha mamporisika izay afaka mamadika e! entina amin'ny fomba kristianina ilay izy araka izay efa voalazan'ny namana ao ambony ao. Fanampiny mitondra soa ho an'ny fianakaviana (mahay mifankahazo) ilay izy satria eo no ambohim-pihaonana. Eo ny hifankafantarana amin'ny havana lavitra sy ny mbola tsy hita. Eo no ahitan'ny fiaraha-misalahin'ny mpianakavy. Fotoana iray ihany koa afahana mifanerasera sy mifampizara ny masaka amin'ny fiaraha-monina, sy ny maro e!
Aiza ve dia fahoriana vao ho vory lalina ny mpianakavy le!
Fiffi - 12/06/2007 11:26
xxx Diso fipetraka hatrany am-boalohany ny sujet, satria ampifanoherinao avy hatrany ny Famadihana sy ny maha-kristianina.
io aloha d tena marina....
naughtyboy - 12/06/2007 11:40
ka tsy mahavaly ny fanontaniko atr@ zao ,reo zv lazainao eto,tsy misy vaovao fa samy mahalala an\_'reo ny rehetra efa nolazaiko tary aloha oe tsy mandala io fomba io za tsotra ny antony
za akory tsy manakana ny famadihana fa hafa no anehoako @ andro ze miredareda ato ampoko ny fahatsiarovana reny olontina reny de akaiky azy reny ny eritreritro ka fanomezana vonikazo mampatsiaro ndray fa mbola ihaona andro 1 satria ny vonikazo no ohatra akaiky @ olombelona ka tsy ekeny saiko le nde hilalao vovoka tsy oe zay akory no mety fa zay no safidiko
kalamm ihany refa miresaka fa aza mora tohina na miala bala @ fanontanina apetraky ny hafa :°)resaka daoly ny eto
ary anisany fahaizana miresaka tompoko ny fahaizana mihaino sy mandalina, mamaly ny hafa ra te iresaka marina :-D
ka azavao ny hevitrao manana argument zany mikasika ny famadihana inn le izy de inn no tanjona fa vonona ny hiheno zay8)
naughtyboy - 12/06/2007 11:41
ho any marozevo io haftara io..
soaihany - 12/06/2007 12:38
Tsara hazavaina angamba ny atao hoe famadihana ny hoe Kristianina angamba efa nazava tany aloha.
naritsimba - 12/06/2007 12:48
Raha famadihana ilana fandaniana be ka hanerena ny hafa dia tsy eken'ny saiko, fa raha manana ianao ka sitraponao ny hamadika ka hanasa olona maro dia ataovy.
Tsy manakana ny olona hamadika aho na manohitra fa ny fomba fanatanterahana azy no tsy ankasitrahako.
Ary rehefa afaka ny andro Sabata, dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria, renin'i Jakoba, mba handeha hanosotra ny fatin'i Jesosy.[/b] Marka 16:1
1-Moa ve azo lazaina fa niomana ny andeha hamadika i Maria Magdalena sy Salome ary Maria raha nanao io fihetsika io?
2-Raha dinihana tsara indray dia moa ve azo lazaina fa ny tsy fankasitrahan'ny Jesoa ny ho kitikitihana ny fatiny no nahatonga azy nitsangana sa ho fanamarinana izay voalaza fa hitsangana Izy.
3-Raha io fihetsika nataon'i Maria Magdalena sy Salome ary Maria io dia mampiseho fa efa fomba fanaon'ny olona tao @ zanak'Israely ny fikarakarana faty tahaka an'io, moa ve izany milaza fa mamadika ny firenen'israely?
4-Raha ny Malagasy ve no mikarakara faty dia lazaina fa manompo sampy fa raha ny firenena hafa dia tsy manompo sampy?
Alohan'ny hamalianareo dia mandiniha tsara aloha vao milaza hoe tsara sa ratsy ny fombantsika, tokony ho tazonina ve ny fomba malagasy? raha tazonina dia ilaina havaozina ve ny fanatanterahana azy?
Antsika rehetra no mieritreritra.
naughtyboy - 12/06/2007 13:18
soa ihany inn no tanjona avy eo misy zv endrasana v @ reny razana reny sa ahoana..ka ra misy mifanohitra v zany @ fisainana kristiana sa tsia ?finoana avy reo razana taloha mantsy ny oe mitahy ny razana
ikaretsaka - 12/06/2007 17:41
Miarahaba an\_'i Naritsimba, sady hamaly ny fanontaniana
1)amiko ny principen\_'ny famadihana dia hoe hamoha fasana, hikarakara ilay razana (faty) amin\_'ny fomba maro samihafa toy ny famonosana lamba azy na fanosorana zava-masina azy na ny fanasana ny taolambalony (araka ny kolotora io)
2)amiko dia ny fanatanterahana ny efa voalaza no nitsangany t@ maty no nitsanganany, tsy niteny mihitsy manko izy hoe \_"aza kitikitihana ny fatiko\_"
3)Misy karazam-poko Jiosy mpanao io fomban\_'izy telo ireo tokoa ka
4)Izay manko... toe-tsaina io , toe tsaina...
amiko tsy misy maharatsy ny manaja ny fomba ka , tsy hoe niova ho izao aho dia tsy ataoko intsony ny fomba izay tsy hitako loatra izay maharatsy azy
2Tes 2,15 tazony tsara ny fomba azonareo na tamin\_'ny teny voalaza (lovan-tsofina, traditions) na t@ taratasy nosoratana
Mihavao isan\_'andro ny andro, anjarantsika koa no manova sy mi -adapt ny fombatsika hifanaraka amin\_'izany! Misy ary maro ny fiangonana sy ny finoana efa manao an\_'izany
xxx - 12/06/2007 18:08
Izaho dia isany mpiteny an'ilay hoe: Aza mitsikera zavatra tsy fantatra. Tsy fanampenam-bava velively izany, fa tena fahendrena.
Tsy io ihany anefa no nolazaiko fa hoy koa aho hoe: aleo manontany aloha rehefa tsy mahalala.
Ataoko fa mazava io.
Page rendered in 1.3329 seconds